Xiisad ka taagan xadka Kenya iyo Itoobiya - Awdinle Online
Ugu 10 qof oo u dhashay Kenya ayaa la xiray, waxaana loo kaxeystay dhinaca Itoobiya xilli ay xisaad ka taagan tahay xadka labada dal.
Ciidamada Itoobiya waxay sheegeen in dhalinyaradan ay gabaad siiyeen xubno ka tirsanaa koox la yiraahdo OLF Shane kuwaas oo lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen weeraro is xig xigay oo ka dhacay galbeedka iyo koonfurta Itoobiya.
Dadka deegaanka ayaa ciidamada Kenya ku eedeeyay inay daawanayeen markii ciidamada Itoobiya ay dhalinyarada ka dhex qabanayeen gudaha Kenya.
Kenya iyo dowladda kama aysan hadlin arrintani.
Previous articleGuddoomiye Cumar Filish oo kulan xasaasi ah la qaatay Safiirka Midowga Yurub
Next articleDagaal ka dhan ah Al-Shabaab oo lagu dhawaaqay